१० नम्बर जर्सी र फ्यानहरुलाई सम्झिरहनेछुः अनिल गुरुङ - खेल - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
१० नम्बर जर्सी र फ्यानहरुलाई सम्झिरहनेछुः अनिल गुरुङ
नेपाली फुटबल राष्ट्रिय टोलीका फरवार्ड अनिल गुरुङ मंगलबार हुने नेपाल र फिलिपिन्सबीचको खेलमा अन्तराष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिने भएका छन्। सन् २००७ मा अनिलले विश्वकप छनोट अन्तर्गत एसियाली क्षेत्रको ओमानसँगको खेलमा नेपाली टोलीबाट डेब्यू गरेका थिए। त्यसयता अनिलले नेपालको जर्सीमा ४९ वटा अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिसकेका छन् भने फिलिपिन्ससँगको ५० औं खेल उनको अन्तराष्ट्रिय करिअरकाे अन्तिम खेल हुनेछ।
पाँच वर्षयता नियमित मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबबाट खेलिरहेका अनिलले क्लब फुटबलमा दुई दर्जन बढी उपाधि उचाल्नुका साथै २०७० सालको ए डिभिजन लिग पनि उचालेका थिए। जुन उनको मुख्य उपलब्धि हो। सन्यासको सेरोफेरोमा रहेर अनिलसँग यज्ञराज जोशीले गरेको कुराकानीः
अझै उमेर थियो, अनिल गुरुङ देशका लागि अझै खेल्न सक्थ्यो? किन अहिलै सन्यास घोषणा गर्न लाग्नुभएको?
देशका लागि अझै खल्न सक्छु भन्ने चाहँदा चाहदै पनि हरेक खेलाडीको जीवनमा एउटा मोड आउँदो रहेछ, जहाँ उसले विश्राम लिनुपर्छ। आफू जन्मेको देशका लागि खेल्न पाउँदा खुशी पनि लागिरहेको छ भने अब खेल्नेछैन भन्ने लाग्दा दुःख महसुस भइरहेको छ।
पछिल्लो समयमा राम्रा खेलाडीहरु पनि आइरहेका छन्। राष्ट्रिय टोलीमा भएका नयाँ अनुहारहरुले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरुका लागि पनि यो एक अवसर हो। अर्को कुरा भनेको पछिल्लो चरण लामो समय नेपालमा घरेलु लिग पनि भएको छैन्। कहिले खेल होला र खेलौला भनेर बसिरहनुपर्ने स्थिती देखा पर्यो। त्यही भएर पनि अन्तराष्ट्रिय फुटबलबाट बिट मार्न लागेको हुँ।
नेपालको जर्सीमा अन्तिम खेल खेल्न गइरहनु भएको छ, कस्तो महशुस गरिरहनु भएको छ?
केही भावुक बनाएको छ। अन्तिम खेलमा पनि जति मिनेट खेल्छु, देशका लागि खेल्छु, उतिकै जोशले खेल्छु। समर्थकहरु पनि आउनुहुन्छ होला सायद। समर्थकहरुले मलाई धेरै मायाँ सपोर्ट गर्नु भएको छ। धेरै कुराहरु ‘मिस’ हुनेछ अब देखि। भोलीको दिन चाही मेरा लागि निकै महत्वपुर्ण हुनेछ।
साेलिडारिटी कपकाे उपाधि उचाल्दा कपका साथमा अनिल गुरुङ
दशक भन्दा लामो समय मैदानमा बिताएको अनिल गुरुङले खेलेर के पायो त?
जहिले पनि मैले राम्रो प्रदर्शन गर्थे, मिडियाहरुको हेडलाइनमा मेरो नाम आउथ्यो। दक्षिण एसियामा अनिल गुरुङ भनेर थुप्रै खेल प्रेमीहरुले चिन्ने गर्छन्। खेलाडीहरुले पाउने भनेको नै पहिचान हो, नाम हो। त्यो नै मैलेपनि पाए जस्तो लाग्छ।
आफ्नो फुटबल करिअरबाट चाही कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
म एकदमै सन्तुष्ट छु। फुटबल प्लेयर हो, कहिलेकाही ‘अप एण्ड डाउन’ चाँही भैरहन्छ। समग्रमा म मेरो फुटबल प्रदर्शनबाट सन्तुष्ट छु।
सन्यासपछि के गर्ने योजना बनाउनुभएको छ?
म राष्ट्रिय टोलीबाट मात्रै सन्यास लिइरहेको छु। क्लबबाट अझै केही वर्ष खेल्छु। जति खेल्न सक्छु, जति म फिट हुन्छु त्यहिले सम्म क्लबबाट खेल्छु। त्यसपछिको समय भनेको आफूले फुटबलबाट प्राप्त गरेको ज्ञान, सिप, अनुभव कतै न कतै अन्यलाई पनि बाड्नेछु। फुटबलबाट चाँही म कहिलै टाढा हुन सक्दिन।
राष्ट्रिय टोलीबाट बाहिर रहँदा अनिल गुरुङले सबैभन्दा बढी ‘मिस’ गर्ने कुरा कुन हो?
राष्ट्रिय टोलीबाट बाहिर रहँदा अब मैले सबैभन्दा बढी ‘मिस’ गर्ने भनेको मेरो १० नम्बरको जर्सी र मेरा समर्थकहरु नै हो। खेल खेल्दा जुन समर्थकहरुले अनिल गुरुङ भनेर चिच्याउँछन्। त्यो कुराकाे सारै ‘मिस’ गर्नेछु।
अहिलेसम्म पनि सम्झिरहने क्षण चाँही कुन हो?
२००९ मा प्रथम प्रधानमन्त्री कप खेलेका थियौं। त्यतिखेलको खेलहरु चाही एकदमै महत्वपुर्ण र प्रतिस्पर्धी थिए। दक्षिण एसिया र थाइल्याण्डका टोलीहरुलाई हराउँदै हामीले उपाधि उचालेका थियौं। त्यो जित्दा खेरि म निकै खुशी भएको थिए। त्यो क्षण अहिले पनि सम्झिरहन्छु।
खेलाडीका रुपमा अनिल गुरुङको अधुरो सपना चाँही?
मेरा पालमा नेपालले जित्न नसकेको खेल भनेको साफ च्याम्पियनसिप हो। २०१३ को प्रतियोगिता नेपालको जित्ने चान्स बढी थियो। टिम पनि राम्रो थियो। त्यो नेपालले जित्न पर्ने प्रतियोगिता थियो। आफ्नो पालामा साफ च्याम्पियनसिप जित्न नसकेको अपुर्यता अहिले पनि खड्किरहन्छ।
प्रकाशित २७ कार्तिक २०७४, सोमबार | 2017-11-13 16:58:21